Izicelo-Nanjing Mingke Process Systems Co., Ltd.
Ibhande Lensimbi Lokucindezela Ibhande Eliphindwe Kabili
I-Wood based panel flat pressing production line ithatha i-double belt press system, esebenza ngokusebenza ngokuqhubekayo kwamabhande ensimbi nangaphansi.
Ibhande Lensimbi For Mende Press
Ibhande lensimbi lokucindezela kwe-Mende lithwala ukucindezeleka okuphezulu kakhulu, ngoba amabhande athwala ingcindezi egobayo eqhubekayo kanye nengcindezi yokushisa.
Ibhande lensimbi elinamandla aphezulu le-Mingke lidlala indima ebalulekile ezinhlelweni eziningi zezinqubo ezishintshayo zezimboni.
Ibhande Lensimbi Le-Rotocure
I-Rotary Curing Machinery (i-Rotocure) iyisisetshenziswa esiqhubekayo se-vulcanization yesigubhu senjoloba, esifakwe ibhande lensimbi lekhwalithi ephezulu ukufeza ukukhiqizwa okuqhubekayo.
Ibhande Lensimbi Le-Plate Vulcanizer
I-Flate Vulcanizer iyisisetshenziswa esikhethekile somkhiqizo ohlukahlukene owenziwe ngenjoloba wokubumba i-vulcanization, ukumiswa kwepuleti lensimbi eliphakeme, lingathuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo, linciphise imvamisa yokushintshwa.
Amabhande Ensimbi Wokupholisa I-Flaker
Amabhande Ensimbi Engagqwali e-Mingke enza kahle ekumelana nokugqwala, ngakho-ke asetshenziswa kabanzi embonini yamakhemikhali emishinini ephehlayo ukukhiqiza ama-flakes amakhemikhali njengesihambisi sokupholisa.
Amabhande Ensimbi Wokupholisa I-Pastillator
I-pastilator yokupholisa ibhande lensimbi iwuhlobo lwemishini yokuncibilika kwe-granulation.Izinto ezincibilikisiwe ziwela ngokulinganayo ebhandeni lensimbi elihamba ngesivinini esifanayo.
Ibhande Lensimbi Lokuhhavini Wokubhaka Womhubhe
I-Mingke Carbon Steel Belts isetshenziswa kabanzi embonini yokudla, njengohhavini wokubhaka womhubhe.Kunezinhlobo ezintathu zamahhavini: i-ovini yohlobo lwebhande lensimbi, ihhavini yohlobo lwebhande le-mesh kanye nohhavini wohlobo lwepuleti.
Ibhande Lensimbi Lomugqa Wokukhiqiza Kashokoledi
I-Mingke Stainless Steel Belts isetshenziswa kabanzi embonini yokudla, njengolayini wokukhiqiza ushokoledi.
Ibhande Lensimbi Lokudlala Kwefilimu
Ibhande lensimbi elipholishiwe le-Mingke supper lingasetshenziswa emishinini yokusakaza ifilimu.Ukusakazwa kwefilimu kusetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni amafilimu epulasitiki okupakisha, amafilimu okuhlunga namafilimu epulasitiki asebenza Kaningi, ama-Laundry pods neminye imikhakha.
Ibhande Lensimbi Engagqwali Lokwenza Amaphepha
Ibhande lensimbi le-Mingke lingasetshenziswa embonini yokwenza iphepha ngemishini yokubhala amaphepha.Ngokuvamile ibhande libanzi kakhulu, lifinyelela ngaphezu kwamamitha angu-9 ububanzi, kuyilapho ubukhulu bebhande buba ngu-0.8mm.
Ibhande Lensimbi Lokuhlolwa Kwesondo Lezimoto
Ibhande lensimbi le-Mingke lingasetshenziswa embonini yezimoto ukuze lihlolwe futhi lihlolwe, njengokuhlaziywa komhubhe womoya, ukuhlolwa kwamasondo nezinqubo zokuklama imoto.